Gudoomiye Jawaari oo taageero u muujiyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. – Radio Daljir
Gudoomiye Jawaari oo taageero u muujiyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Febraayo 6, 2017 9:51 g 0
Muqdisho, Feb 07 2017-Gudoomiyaha golaha shacabka ee barlamaanka Soomaaliya Pro Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa muujiyey taageeradiisa musharax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
War kooban oo uu gudoomiye Jawaari soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku ammaanay khudbaddii uu jeediyey Farmaajo xilli uu ka hor hadlayey labada gole ee barlamaanka Soomaaliya.
“Wadani aad loola dhacay iyo hadal wanaagsan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan filayaa inaan si cad u helnay cidda aan dooranayno”, Ayuu yiri mudane Jawaari gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya.
Dhanka kalena afkaar ururin ay samaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa codadkii ay shacabka Soomaaliyeed dhiibteen 60% kudhowaad waxa ay ugu codeeyeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Dhalinyarada iyo imbadan oo kamid ah dadweynaha kale ee Soomaaliyeed ayaa barohooda bulshada ku xardhay sawirrada iyo ereyo ay ku taageerayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kamid ah 23-ka musharax ee u taagan xilka madaxweynaha.
DHEGEYSO-Horumar laga sameeyey dhismaha wada isku xidha Eyl iyo Dan-gorayo.
Inta badan wadooyinka Muqdisho oo saaka xiran kahor doorashada madaxtinimada.